Dhageyso: Ex Xildhibaan Zakriya Xaaji cabdi oo ka hadlay Arimo badan oo xasaasi ah – GOBOLADA.COM
Dhageyso: Ex Xildhibaan Zakriya Xaaji cabdi oo ka hadlay Arimo badan oo xasaasi ah
June 12, 2022 June 12, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Dhageyso: Ex Xildhibaan Zakriya Xaaji cabdi oo ka hadlay Arimo badan oo xasaasi ah
Xildhibaan Zakriya Xaaji Cabdi oo ka tirsan baarlamaankii 9aad ee Jamhuuriyada Soomaaliya ayaa ka hadlay arimo badan oo Xasaasi ah.
Mudane Zakriya Xaaji Cabdi ayaa ka mid ahaa Musharixiintii u tartameysay Xilka Madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyada Soomaaliyada Soomaaliya balse xilkaas uu ku guuleystay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Xildhibaan Zakriya ayaa ugu horreyn waxaa uu sheegay in doorashadii 15kii may ee loo tartamayay madaxweynaha Soomaaliya uusan wax lacag laaluush ah bixin marka laga reebo lacagta diiwaangelinta musharixiinta madaxweynaha oo gaareysay $ 40’000 lacagta doolarka maraykanka ah.
“Isaga oo sii hadlaya ayaa Mudane Zakriya Xaaji Cabdi waxaa uu ku baaqay in lacagihii laga qaaday musharixiintii u tartameysay Madaxweynaha Soomaaliya loo weeciyo dhinaca gurmadka Abaaraha si loo samata bixiyo dadka Abaarta ay ku saameeysay degaano badan oo ka tirsan gobolada dalka.
Ugu dambeeyntii ‘ Xildhibaan hore Zakriya Xaaji Cabdi ayaa ka hadlay diyaarado drones ah oo ay ka xanibtay Dawladii Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana uu sheegay in dacwada diyaaradahaasi ay taalo maxkamadda gobolka Banaadir .
Halkaan Hoose ka Dhageyso Waraysiga Xildhibaan Zakriya Xaaji Cabdi:
Dhageyso: Siyaasi Axmed baasto oo soo dhaweeyay balan qaadyadii uu Sameeyay Madaxweynaha Cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
Duqa Magaalada Muqdisho oo daahfuray qaadista Imtixaanka shahaadiga ee Ardayda Fasalka 8aad
Guddoomiyaha Golaha shacabka shacabka Soomaaliyeed u diray Hambalyada ” 26-ka Juun + Sawiro ￼￼
Madaxweyne Xasan sheekh oo ka tacsiyadeeyay geerida Marxuum Cabdullaahi Cabdi gariin & Jawaahir Axmed Cilmi